I-Semalt Expert: 10 I-Cyber ​​Security Realities
Icandelo lokhuseleko lwe-cyber liqhubekela phambili ngokukhawuleza kunye neengcali ezininzi ezijoyina i-shishini.Ngenxa yoko, isofthiwe engakumbi kunye nenkqubo yenzululwazi yenzelwe kwaye phantse i-malware entsha engama-230 000 iqaliswa imihla ngemihla.Kuqikelelwa ukuba i-dollar eziyi-100 yezigidi idalwe ngonyaka ukujongana nolwaphulo-mthetho.
Nangona nje usebenzisa i-intanethi, ulungele ukuhlaselwa kwe-cyber. Ezilandelayoiingcinga zikaNik Chaykovskiy, i Semalt Umphathi wabaPhumeleli abaPhezulu abaPhezulu, bachaza ukuba kuyingozi kangakanani kwisiphequluli ukuba isebenze ngaphandle kokukhuselwa ngokufanelekileyo - vps ip peru.
1. Abahlaseli be-cyber abayingozi kakhulu kwihlabathi
I-FBI inoluhlu lwabaphuli be-intanethi abazifunayo kakhuluilahleko zabasebenzisi bewebhu kwiibanga ezingama-350,000 ukuya kwii-100 yezigidi. Kulo mzuzwana, izifundo zeJABBERZEUS zifunwa kakhulu yiFBI.
2. Ininzi yegciwane lekhompyutha ekwimbali
I-MyDoom ibonwa njengendleko enkulu kakhulu kwihlabathi kwi-cyberkhu seleko. Kucatshangelwa ukuba intsholongwane sele ibangele umonakalo wama-38.5 billion.
3. Iinjongo ezikhethiweyo kubahlaseli beendaba zoluntu
Kuze kube yiminyaka, kukho abasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-1.6 zeendaba zoluntu ezenza uluntu jikeleleokujoliswe kuyo. Abasebenzisi abasebenzisa ixesha elibalulekileyo kwiintanethi zentlalo banokuthi baxhatshazwe kwezi zihlaselo.
4. I-99% yeekhomputha zisesichengeni sokukhupha iikiti
Iikhomputha ezingama-99% zinenkqubo ezifana ne-Adobe Reader, i-Oracle Java kunye ne-AdobeI-Flash efakwe kwiinkqubo zazo zokusebenza. Ubuninzi bee software luyifaka indlela apho abahlaseli banokukwazi ukufikelela kuzoyakho igajethi..
5. Izigwenxa ze-intanethi zikhethwe ngendlela yokuchaphazela amaxhoba
Ixhoba lokuhlaselwa kwe-cyber lilawulwa lula kuba abantu bakha ikhonkco elibuthathakangokuphathelele ukhuseleko lwe-cyber. Ngaloo ndlela, ubunjineli bezentlalo kubhekiselele kwindlela yokuqinisekisa ukuba abantu bachaza imfihlo ngokuxhaphazangokwengqondo.
6. Ukhuseleko: imisebenzi yangaphakathi
Kwiimeko ezininzi, malunga neepesenti ezingama-59 zabasebenzi beba idatha yenkampani xa baziyaxothwa okanye xa ziyeka. Ezinye izinto ezinokunyanzeliswa ukuba zigcinwe zibandakanya ukungena ngongendawo, ukungabakhathaleli kunye nokuxhaphaza.
7. Urhulumente wakho ukwandisa ubungozi bakho
Kuyinyaniso ukuba oorhulumente baqulunqa i-malware ngenjongoyokusebenzisa njengesixhobo sedijithali. I-malware iyifumana indlela eya kwimibutho yabucala kunye neekhompyutheni zobuqu ezibangelwa ukuziphendukela kwemveloye-malware.
8. Kukho imephu esondeleyo ebonisa abahlaseli besenzo
I-United States yinjongo ekhethiweyo kubaphuli be-cyber. Ngokomzekelo, iInethwekhi yeSebe lezoKhuseleko i-U.S ihlupheke ngaphezu kweedola ezili-100 ezidalwa ngumonakalo ngenxa yokuhlaselwa okwenziwe ngumntu waseShayina.
9. I-Cybercrime iyinselele enkulu kwihlabathi
I-68% yemali elahlekileyo ngenxa yokuhlaselwa kwe-intanethi ibonwa njengengenakwenzeka.Ulwaphulo-mthetho lwe-Cyber ​​alubizi nje kuphela kodwa luphinde lube neminye imingeni kwiinkampani jikelele.
10. Hacktivism yiyona nto yokuphefumlela eyinhloko eyenza i-cyber ihlasele
I-Hacktivism ixabisa ngaphezu kwama-50 ekhulwini kuwo onke ama-cyber-attack worldwide. Eli xeshaukubonakaliswa kwezicelo ezichasayo zeekhompyutheni ngenjongo yokuphucula i-ajenda yezopolitiko.
Khumbula njalo, ukuba akufanele uhlasele izigwenxa ze-Intanethi. Ngoko akukho khuselokusebenza ngokufanelekileyo, akukho nengozi ayikho kakhulu. Kungakhathaliseki ukuba ubukhulu bomngcipheko wokhuseleko lwe-cyber, kufuneka kwenziwe amanyathelo afanelekileyoukukhusela nawuphi na ukuhlaselwa onokujamelana nayo.